Kulanka Golaha Kabineetka DDSI Oo Kadhacay Xafiiska Madaxwaynaha - Cakaara News
Kulanka Golaha Kabineetka DDSI Oo Kadhacay Xafiiska Madaxwaynaha
Jigjiga(CN) Isniin, 2da November 2015, Kulanka golaha kabineetka DDSI ayaa galabta kadhacay hoolka shirarka ee xafiiska madaxwaynaha oo kuyaala xarunta cusub ee madaxtooyada.
Kulankan ayaa waxaa ugu horayn furay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar isagoo soo hordhigay golaha kabineetka ajandayaasha kulanka oo ahaa: dardargalinta qaab shaqeedka guud iyo hirgalinta iyo dabagalka qorshayaashii biyaha, xarumaha caafimaadka iyo hospitaalada.
Kadib dood dheer iyo falanqayn uu goluhu kayeeshay ajandayaasha sare ayaa wuxuu gurigu islaqaatay in ladardargaliyo kashaqaysiinta dhamaan ceelashii hore iyo kuwa danbaba, in nidaaminta lacagaha kasoo xarooda biyaha, xoog saarida sidii durba looga faraxalan lahaa mashruucyada biyaha ee waa wayn.
Waxaa kale oo gurigu islaqaatay in dardargalin adag lagu sameeyo cisbitaalada, xarumaha iyo rugaha caafimaadka oo ay dhamaan wada shaqeeyaan iyadoo shaqaalahoodana loo dhamaystiri doono kadibna dabagal joogta ah lagu sameeyo.
Dhanka beerahana in sanadkan laga dhigo 3 laab waxsoo saarkii sanadihii hore iyo in dhanka waxbarashadana sanadkan aan lahelin arday da’da waxbarashada gaadhay oo iskuul la’aan ah.
Jidadkana xooga lasii saaro dhismaha buundooyinka.